फेरी गयो भूकम्प !::Leading Nepal News
फेरी गयो भूकम्प !
बैशाख २९, काठमाडौं । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा गएराति भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको दैलेख केन्द्रविन्दु भएर ५.१ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रले जनाएको छ । भूकम्पमापन केन्द्रकाअनुसार राति १२ बजेर ३६ मिनेट जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । भूकम्पको धक्का दैलेख र आसपासका जिल्लाहरुमा समेत महसुस गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस… रासायनिक विषादी घट्दै, जैविकमा आकर्षण बढ्दै.. . पाँच वर्ष अघि तरकारीमा विषादीको जाँच सुरु गर्दा बजार पुगेका तरकारीमा ९० प्रतिशतसम्म विषादी पाइयो । यो विषय सार्वजनिक भएपछि किसान उपभोक्त दुवै सचेत भए । विषादीको प्रयोगमा कमी आयो । जैविक विषादी प्रयोग बढ्न थाल्यो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन्
अग्र्या्निक (प्राङ्गगारिक)तरकारी खेतीले माटो गुणस्तर सुधार हुन्छ । मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ । स्वास्थ्यमा असर गर्दैन । त्यसकारण किसान रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नगरी अग्र्या्निक खेतीतर्फ अकर्षित हुन थालेका छन् । सरकारले पनि रासायनिक विषादीको साटो जैविक विषादीलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामकृष्ण सुवेदी सरकार रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई कम गर्ने र जैविक तथा वनस्पतिजन्य विषादीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी काम गर्दै आएको बताउँछन्